दादुरा रुवेलाले चेपाङ गाउँमा २ को मृत्यु, १५० बिरामी | NewsKarobar
गृहपृष्ठ दादुरा रुवेलाले चेपाङ गाउँमा २ को मृत्यु, १५० बिरामी
दादुरा रुवेलाले चेपाङ गाउँमा २ को मृत्यु, १५० बिरामी
दक्षिणी धादिङको बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका–६ स्थित चेपाङगाउँमा एक महिनादेखि फैलिएको दादुरा रुवेला रोगका कारण दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने १५० बिरामी परेका छन् ।
दादुरा रुवेलाका कारण २९ महिनाको अनिशा चेपाङ र आठ महिनाको वसन्त चेपाङको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवामा संलग्न गाउँपालिका स्वास्थ्य सहसंयोजक अनमी सीता खरेलले बताइन् । गाउँमा महामारी फैलिएपछि उपचारमा संलग्न खरेल औषधिसहित उपचारमा खटिएकी छन् ।
चेपाङ गाउँमा स्वास्थ्य समस्या आएपछि बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाबाट पटकपटक स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँ पुगेर उपचार गरेको थियो । फागुन ७ गते चरौँदी स्वास्थ्य सेवा इकाइमा बिरामी बच्चा लिएर चार जना अभिभावक आएका थिए । रोग फैलिएको खबर गाउँपालिकामा आएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित गाउँमा पुगेर लक्षणका आधारमा उपचार गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शंकरबाबु दुवाडीले बताए ।
दुई वर्षअघि धादिङ जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि चेपाङ गाउँका मानिसले हालसम्म पनि खोप नलगाएको सोल्टीमाया चेपाङले बताइन् । ३० वर्षीया सोल्टीमायाको छ बच्चामध्ये एक जनाको दादुराका कारण मृत्यु भएको थियो । उनले आफूले र बच्चाले अहिलेसम्म खोप नलगाएको बताइन् ।
आज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण भट्टराई, स्वास्थ्य शाखा संयोजक दुवाडीसहितको टोली गाउँ पुग्दा उपचार नपाएर बिरामी परिरहेका धेरैजसो घरमा भेटिएका थिए । गाउँपालिकाले महामारीका रुपमा रहेको दादुरा रुवेला नियन्त्रण गर्न आफूले मात्र नसकेकाले सहयोगका लागि स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ र वाग्मती प्रदेश सरकार समेतलाई आग्रह गरेको छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ४० वर्षमुनिका सबैलाई दादुरारुवेला खोप लगाउने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए । (रासस)
पछिल्लाे - कांग्रेसको प्रश्‍न- सरकार ! अझै साइत कुर्ने कि व्यापक परीक्षणमा लाग्‍ने ?
अघिल्लाे - लकडाउन थप कडा बनाउने सरकारको निर्णय, अर्को स्थानीय तहमा जान नपाइने